トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny tontalin'ny lal?na
Fa dia rafitra ny tontalin'ny ny fitsipika izay koa dia nasongadina ao amin'ny gazety sy ny vaovao ny fotoana fohy lasa izay No halavitry ho an'ny olona izay tsy manana ny sisin'ny amin'ny trosa, mety ho maro ny olona eto an-tany tsy mahalala izay tena nifehy.
Tamin'ity indray mitoraka ity, fa ny tontalin'ny ny lal?na, dia hampiditra ny mombamomba izay lasa fahafahana mamaritra ny ao anatiny.
Inona no tontalin'ny fanaraha-maso? tanteraka ny
habetsahan'ny fitsipika, fony izy nanao sonia ho an'ny nindrana, ny mpitrosa no lal?na izay mamaritra ihany hatramin'ny iray ampahatelon'ny vola miditra isan-taona no vola tsy hisambotra. Ny
Manokana, taorian'ny fampiharana en cas de karamaina vola miditra isan-taona mpanao 3,6 tapitrisa, dia tsy ho afaka ny hisambotra ihany no niakatra ho 1,2 tapitrisa yen.
izany, na dia zavatra mitovy tamin'izany no nanao sonia ho an'ny orinasa mihoatra ny iray, dia tsy ho afaka ny hanao ny trosa mihoatra ny 120 tapitrisa.
Ankoatra izany, rehefa ho fampiharana vaovao mpanjifa nindrana amin'ny fitantanam-bola, dia ny tontalin'ny ny didy sy niara koa ny manaiky ny fidiram-bola taratasy ankoatry ny ara-dal?na tsy maintsy fanadinana.
ireto no ho eto ankoatra ny mpanjifa fitantanam-bola, ihany koa ao amin'ny orinasa bola na ny carte de cr?dit orinasa, tiako milaza fa mahagaga mahazatra lal?na, satria ny zavatra tsy maintsy ampiharina.
vola lal?na tanteraka dia teraka fototra
vola tanteraka fitsipika teraka, dia manana ifandraisany amin'ny izany olona hanao ny tena niraharaha nitombo. Anisan'ireo ny zanabola, antsoina hoe ny fotsy faritra
fampiharana lasa izay, dia afaka manao ny mpanjifa ara-bola ny malina raha misy anankiray habetsaky ny vola miditra, na maro nindrana.
Ho vokany, dia milaza fa ny olona izay, dia nangorohoro ny famatsiam-bola ho valin 'ny ara-toekarena ny Jery mitongilana dia mitombo isa ny tranga mampiasa ny mpanjifa bola.
Na izany aza, hamaly drafitry ny olona izay nindrana ny Mamanarazu, vokatr'izany izay nanana trosa bebe kokoa ho haingana snowball, eny fa olona maro ihany koa ny fiainana fa lasa Mamanaranaku.
avy amin'izany fironana, ny mpitrosa tsy maintsy hanatanteraka ny tena niraharaha nitombo, dia maro tamin'ny mpanjifa bola sy ny fitantanana Machikin lasa henjana.
Noho izany, Machikin toy ny efa miorim-paka ao amin'ny faritra, dia tsy manana, fara fahakeliny, izay lasa ny famerenana Mamanarazu bankirompitra.
lazaina amin'ny teny hafa, na dia nahay ny zavakanto ihany koa ny nampindrana ny olona izay nindrana, dia samy ao amin'ny toerana misy ny lal?na dia lasa toerana Yuka fa tsara.
Noho izany, ao amin'ny governemanta ankehitriny dia manome iray amin'ireo andalana ao amin'ny endriky ny fanaraha-maso ny vola tanteraka.
toy ny mpampiasa lafiny, nefa mety hahatsapa manahirana ampahany tsy azo tanterahana Misambotra ihany no niakatra ho any nisy vola, amin'ny lafiny iray hafa dia tsy mba misy zavatra ratsy governemanta dia ny antsika mba hijanona eo anatrehan'i latsaka ao trosa helo in Xiang.
afa-tsy ny tontalin'ny lal?na
Amin'izany fomba izany, ny tontalin'ny ny lal?na dia lal?na izay fototra ho an'ny vola olona iray ny olona iray dia afaka mandray dia voafetra ihany.
Na dia izany aza, misy ihany koa ny tranga izay fitsipika ity dia ny afa.
noho ny mahazatra ireo, toy ny fametrahana antoka sy ny fiara fampindramam-bola, raha tena lehibe fiantsenana, fa ireo izay manana fifandraisana akaiky amin'ny fiainana.
koa, ho an 'ireo izay efa ekena ho toy ny afa-tsy ao amin'ny habetsaky ny lal?na tanteraka, dia ahitana ihany koa ny raharaham-barotra mampisambotra vola.
izany no ho velona tsy hampisambotra vola, dia natao mba haka ny endriky ny mampisambotra an'i tompona fandraharahana ho an'ny fandraharahana vola. Mba
hatao voazaha toetra, satria mitaky indrindra ny manaiky ny fidiram-bola taratasy, tamin 'ny fotoana ny fangatahana dia tsy maintsy efa namboatra ny hetra sy ny hetra hiverina taratasy fandoavam-bola.
Ankoatra izany, dia mindrana amin 'ny fitsipika, banky sy voninahitra sendik? tsy rakotry ny tontalin'ny ny lal?na.
raha oharina amin'ny mpanjifa bola, na dia ny fandinihana isan'ny andro mitaky izany tombon-dahiny izany, milaza aho fa misy ihany koa ny miezaka ny misafidy raha te-hisambotra vola iray.
Mazava ho azy fa unregulated Tsy midika akory izany vola nindramina voafetra.
indrindra, ao an-raharaha ny olona izay niafara tamin'ny trosa amin'ny lafiny sasany, satria tonga ny fanadinana mafy, dia misy toe-javatra maro izay tsy hisambotra vokatr'izany.
mifandray / ny vola nindramina avy amin'ny banky
mifandray / -hanofa "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html"> vola any amin'ny banky
vola lal?na tanteraka no isa ny trosa no lal?na, izay faritana ho toy ny iray ampahatelon'ny vola miditra isan-taona ny fetra ambony.
Ankoatra izany, arakaraka ny nindrana vola Misy fandaharana, toy ny taratasy fanamarinana mitaky fidiram-bola.
boky tanteraka dia tena nampihatra fanaraha-maso toy ny mpanjifa bola sy karatra, sy ny raharaham-barotra ao amin'ny hany vola proprietors, dia ho afa-miala amin'ny fanajana ny mindrana any amin'ny banky.
Izany dia mafy kolaka fa ny fisainana mazava ny banky sy ny orinasa no nataony, dia tsy fomba Na izany na tsy manam-petra-bola Borrow.
farany, satria dia noheveriny fa ianao hisambotra ny vola tao am-hamaly izay azo atao isan-karazany ny ny azy, zava-dehibe ny trosa fatratra heverina ho tsara.